अर्जेन्टिनाको विश्वकप जित्ने तयारी यस्तो छ – Himal Post | Online News Revolution
अर्जेन्टिनाको विश्वकप जित्ने तयारी यस्तो छ
himal post २०७५, २१ जेष्ठ ०७:५६ June 4, 2018
एजेन्सी । विश्वकपको तयारीमा रहेको अर्जेन्टिनाले केही दिन अगाडि भएको हाइटीविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा ४—१ गोलले पराजित गर्यो । हाइटीमाथिको जितले अर्जेन्टिनालाई विश्वकपमा दरिलो उपस्थिति जनाउनेमा विश्वास बढेको छ ।
जुन १४ देखि जुलाई १५ सम्म रुसका विभिन्न १२ रंगशालामा हुने विश्वकपमा अर्जेन्टिनाको उपस्थिति कस्तो होला ? अर्जेन्टिनाको भन्दा पनि बढी विश्वका महान खेलाडी भनेर चिनिने लियोनल मेस्सीले कस्तो प्रदर्शन गर्लान् ? यसअघि विश्वकप उपाधि दिलाउन असफल भएका मेस्सीको जादु यो विश्वकपमा चल्ला त ? यी नै प्रश्न, कौतुहलता र जिज्ञासाले फुटबलप्रेमीको मन भरिएको छ ।
विश्वकपमा अर्जेन्टिना आफुलाई सशक्त टिमको रुपमा मैदान उतार्ने तयारीमा रहेको छ । अर्जेन्टिना चर्चित खेलाडी लियोनल मेस्सीको कप्तानीमा मैदान उत्रिँदैछ ।
लियोनल मेस्सी संसारभरका फुटबलप्रेमीले चिन्दछन् भने फुटबलमा लागेका खेलाडीले आफ्नो आइडलका रुपमा मान्छन् । हुन पनि मेस्सी त्यस्ता खेलाडी हुन् जसलाई गोल मेसिनको रुपमा परिचित छन् ।
एन्जल डि मारिया
एन्जल डि मारिया निकै भरपर्दा खेलाडी हुन् । ३० वर्षीय मारिया अर्जेन्टिनाका एक शसक्त खेलाडी हुन् ।
२०१४ मा अर्जेन्टिनाका सशक्त खेलाडी मध्यका हुन् डि मारिया । मिड्फिल्डर मारियाको सन् २०१० को विश्वकप पहिलो थियो । मारिया यो विश्वकपमा पनि अर्जेन्टिनाको मुख्य रोजाइका खेलाडी हुन् ।
२०१४ को विश्वकपमा मारियाले स्वीट्जरल्याण्ड विरुद्ध १ गोल गरेका थिए । उनकै एक गोलको मद्दतमा अर्जेन्टिनाले २०१४ को विश्वकपको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको थियो । मारिया लङ सर्ट हान्न सक्ने खेलाडीका रुपमा मानिन्छन् ।
३० वर्षीय सर्जियो अगुएरो अर्जेन्टिनाका स्ट्राइकर हुन् । उनको अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टोलिमा सन् २००६ बाट आवद्ध भएका थिए ।
अगुएरोको व्यवसायिक फुटबल यात्रा भने सन् १९९७ बाट इन्डिपेन्डिएन्ट क्लबबाट भएको हो । उनी अहिले म्यान्चेष्टर सिटीबाट ब्यावसायिक फुटबल खेल्छन् । सन् २०११ देखि अगुएरो हालसम्म आवद्ध छन् ।
अगुएरोको २०१४ मा एक गोल मात्रै छ । उनले सेमिफाइनल खेलमा नेदरल्याण्ड्स विरुद्ध पेनाल्टीबाट गोल गरेका थिए ।
विश्वकपका लागि प्रारम्भीक टोली
गोलरक्षकः सर्जियो रोमेरो, विलि कबाल्लेरो र फ्रान्स्को अर्मानी
फरवार्डः कप्तान लियोनल मेस्सी, सर्जियो अग्युरो, पाउल डिबला र गोन्जालो हिगुईनले छन् ।
डिफेन्डरः जाभियर मासिरानो, गाब्रिएल मेर्काडो, निकोलस ओकामेन्डी, फेड्रिको फजियो, मार्कुस रोजा, निकोलस ताग्लियाफिको, मार्कुस अकुना र क्रिस्टियन अन्सल्डी रहेका छन् ।
मिडफिल्डरः म्यानुएल लान्जिनी, म्याक्सीमिलानो मेजा, लुकास बिग्लिया, इभर बेनेगा, जियोभानो लो सेल्सो, एन्जल दि मारिया, क्रिस्टियन पाभोन र इडुर्वाडो साल्भियो रहेका छन् ।
संघीयता विरोधी बजेट !